Xoghayaha Amuuraha Dibada ee wadanka Britain oo Booqday Magaalada Muqdisho – SBC
Xoghayaha Amuuraha Dibada ee wadanka Britain oo Booqday Magaalada Muqdisho
Xoghaya Amuuraha Dibada Ee Britain ayaa manta Magalada Muqdisho ku tagay booqasho aan horey loo shaacin, waxaana uu halkas kula kulmay masuuliyiinta sare ee DKMG oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha DKMG ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Safarka wafdiga Xogahaya Amuuraha Dibada ee DOwlada Britain ay ku yimaadeen Magaalada Muqdisho ayaa noqonaya Safarikii ugu horeeyay ee Muudo 20 sanno ah uu ku yimaado Sarkaal sare oo ka socda Dalka Boqortooyada Ingiriiska Dalka Soomaliya.
Amaanka wefdiga William Hague waxaa sugayay Ciidamada Amisom ee ka socda Wadanka Uganda iyo Burundi waxaana intii uu muqdisho joogay kulan saacado qaatay oo albaabadu u xiran yihin uu la qaatay Madaxweynaha SOomaaliya lamina shaacin waxa ay ka wada hadleen labada Masuul.
iimatinka wafdigan ayaa lagu macneeyay in dowlada Britian ay muujiso sida ay Dowlada u daneyneyso Arimaha Dalka Soomaaliya in la sii balaariyo dagaalka looga soo horjeedo Alshabaab.
Dhinaca kale Booqashada Mr Hague waxay muujineysa in Amaanka magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya uu mudooyinkan ka soo reynayo iyadoo ay booqashooyin dhowr ah ku yimaaden wufuud sare oo ka socota Beesha Caalamka.
Mr Hague waxaa ay booqashadiisa googol xaar u tahay shirka ay dowlada Britain dhawaan ku qabaneyso Magaalada London kaasi oo looga arinsanayo Arimaha Soomaaliya Amaanka iyo Burcad badeeda.
Magaalada Muqdisho waxaa bilihii u danbeeyay oo si aad ah u imaanayay Madaxda Dowlaha waaweyn ee Caalamka waxaana sidoo kale dhawaan laga furay xafiiska QM oo horey ugu yaalay Magaalada Nairobi ee Caasimada Wadanka Kenya.